swimsuit andiany iray
Manao ny yoga
Momba ny orinasa mpiara-miasa eto amintsika
Ny orinasa ifandraisanay miasa manokana manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana akanjo fitondra milomano sy fanaovana fanatanjahantena, izay ahafahana mifehy tsara ny vidin'ny famokarana, mifehy ny kalitaon'ny vokatra hatramin'ny lehibe indrindra, ary manafaingana ny valin'ny famatsiana tsena. Amin'izao fotoana izao, misy mpiasa mihoatra ny 2300 ao amin'ny orinasa, ary ny faritra atrikasa dia mihoatra ny 4000 metatra tora-droa.
Tany am-piandohan'ny fiorenan'ny orinasa dia namoaka ekipa mpitantana teknolojia tena mahomby sy mahomby, nametraka rafitra serivisy famokarana famokarana feno, ary nametraka vola be tamin'ny fampidirana ireo andalana famokarana nandroso, milina fanodinana mandeha ho azy, milina fanaparitahana ary fitaovana ilaina. Ankehitriny, azo alaina mora vidy milina fanjaitra akanjo sy fitaovana fanontana fanaingoana sublimation. Misy andiana fivoriambe 6 mahazatra, fanjaitra efatra 4 sy fanana manokana enina tariby, famoahana isam-bolana mihoatra ny 200.000 sombiny.
Ny tranokalanay dia manana teknisianina mihoatra ny 180, ary ny QC za-draharaha za-draharaha tompon'andraikitra amin'ny fisafoana amin'ny fotoana famokarana afovoany sy alohan'ny fandefasana, ataovy azo antoka fa mitazona kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Mba hanohanana ny baiko kely avy any Amazon na mpivarotra madinika kely dia nanomana tahiry ampy ho an'ny trano famolavolana izay afaka atolotra mandritra ny andro maromaro izahay, dia miarahaba anao anao tonga mitsidika ny orinasa izahay handinika fifanakalozan-kevitra ara-barotra raha azo atao.
Address: Efitra 905, trano Rongtaian, No.139 Jinhuai Street, Quanzhou, Fujian, Sina